काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १४० मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेको छ । प्राधिकरणले आज सुपर त्रिशूली, दूधखोला र मच्छेखोला जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार ब्लु इनर्जीले निर्माण गर्ने ७० मेगावाट क्षमताको सुपर त्रिशूलीको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । सो आयोजनाको क्षमता १०० मेगावाट बराबर हुने भए पन ... read more...
काठमाडौँ । तोकिएभन्दा कम परिमाणमा इन्धन बिक्री वितरण गरेको भन्दै सरकारले गोठाटारस्थित भद्रकाली आयल स्टोरलाई दुई लाख जरिवाना गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले आज गरेको अनुगमनका क्रममा सो आयल स्टोरले प्रतिलिटरमा २५ देखि ३५ एमएल इन्धन ठगी गरेको पाइएको थियो । तोकिएको परिमाणमा कमी गरी इन्धन बिक्री वितरण गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले कार्यस्थलमै भद्रकाली आयल स्टोरलाई दुई लाख रुप ... read more...
काठमाडौँ । मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई साधारण शेयर (आइपिओ) बिक्री गर्ने भएको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित सो कम्पनीले सिन्धुपाल्चोकमा १०२ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाले एक अर्ब ४४ करोड बराबरको एक करोड ४४ लाख कित्ता सीमित साधारण शेयर बिक्री गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असोज २९ गते सीमित ... read more...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री डा. नारायण खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफलतातर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने,‘स्वयम नेकपाकै शीर्ष नेताहरुले सरकारको आलोचना गरिरहनुभएको छ । ७ महिनाको यो छोटो कार्यकालको संकेत हेर्दा हामीले अनुमान गर्न सक्छौं कि ओली नेतृत्वको सरकार क्रमिक रुपमा असफलतातर्फ उन्मुख छ ।’ उनल ... read more...
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व रक्षामन्त्री भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । उनले उक्त परियोजना गेजुवाले बनाउन नसक्ने समेत ठोकुवा गरे । नीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले भने,‘म आफैपनि सरकारमा भएको बेला बुढीगण्डकीको विषयमा टुँगो लागिसकेको थियो । नेपालमा गेजुवाको रेकर ... read more...
काठमाडौँ । बडादशैं, तिहार, छटलगायतका पर्वहरुलाई लक्षित गरी ३ महिने अफर सार्वजनिक गरेको छ । टेलिकमले आफ्ना ग्राहकका लागि सोमबारदेखि अटम अफरअन्तर्गत विभिन्न २२ वटा अफर उपलब्ध गराएको छ । यी अफर प्राप्त गर्न १४१५ मा डायल गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ । उक्त अफर आगामी पुस २८ गतेसम्म लिन सकिने टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले जानकारी दिइन । ग्राहकलाई कम शुल्कमा बढी सुविधा दिन ह्याप्पी विकेन्ड ... read more...
काठमाडौं । अहिले आमसर्वसाधारण भनिरहेका छन्–यदि टेलिभिजनमा सवैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम कुनै छ भने त्यो पत्रकार रबि लामिछानेले सञ्चालन गर्ने ‘सिधा कुरा जनतासँग’ र लोकप्रिय सञ्चारकर्मी कोही छ भने त्यो पत्रकार रबि लामिछाने । उक्त कार्यक्रमबाटै रबिले सयौंलाई न्याय दिलाउन सकेकै कारण उनको गुनगान भएको हो । कतिपय पीडितले त रबिलाई ‘हाम्रा लागि रबि नै भगवान हुन’ समेत भनेको विभिन ... read more...
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री मातृका यादवले अहिले चिनीको अभाव नभएको र बजार भाउ पनि नबढेको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री यादवले उपभोक्ताले सस्तो मुल्यमा आवश्यक सामाग्री खोज्नु स्वभाविक भएको बताउँदै अहिले चिनीको कुनै अभाव नरहेको बताएका हुन् । उनले भने,‘बजारमा चिनीको कुनै अभाव छैन । र, बजार भाउ पनि बढेको छैन् ।’ आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा भएको कार्यक्रममा मन्त्री यादवले पत्रका ... read more...
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले बैँकिङ कसुरको मुद्दामा फरार अभियुक्त किष्ट बैंकका तत्कालिन प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीलाई पक्राउ गरेको छ । विगत केही बर्षदेखि फरार रहेका ज्ञवालीलाई महेन्द्रनगर आसपासबाट पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रमुख प्रमुख एसएसपी धिरज प्रताप सिंहले वताएका छन् । उनलाई आजै फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पेस गर्ने प्रहरीले जनाएको छ । ज्ञवालीमाथि ६ करोड सम्पत्ति धितो राखेर ... read more...
स्याङयोङ गाडीको नयाँ सोरुम पोखरामा, ग्राहकलाई विग अफर
२०७५ असोज १९ गते ०८:५५
काठमाडौं । आइएमएस मोटर्सले पोखराको बुद्ध चोकमा आफ्नो नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो अवसरमा स्याङयोङले “स्याङयोङ अनबिटेबल अफर“ सार्वजनिक गरेको छ । स्याङयोङ अन्बिटेबल अफर अन्तर्गत पोखरास्थित स्याङयोङका मुल्यवान ग्राहकहरुलाई पूर्वबजेट मूल्य तोकिएको छ । कम्पनीले पूर्ब बजेट मुल्यमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको छुट, प्रत्येक स्याङयोङ गाडीको खरिदमा स्यामसुङ ग्याल्याक्सीनोट ९ क्राउन, एक्सचेन्जक ... read more...
काठमाडौँ । ३३ केजी सुन प्रकरण सेलाएको बेला फेरी ५ केजी सुनसहित एक ब्यक्ति पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मङ्गलबार साँझ ५ केजी सुनसहित एक जनालाई तारकेश्वर नगरपालिकास्थित तीनपिप्लेबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । चीनको केरुङ नाका हुँदै काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको सुन विशेष सुराकीको आधारमा बरामद गरिएको परिसरका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार लामाले बतााए । उनले पेटीमा बाँधेर स ... read more...
'पाकिस्तान एक्पो' को नवौं संस्करण आजबाट सुरु
२०७५ असोज १७ गते १५:५०
काठमाडौं । राजधानीस्थित रहेको यूनाइटेड वल्ड ट्रेड सेन्टरमा 'पाकिस्तान एक्पो' को नवौं संस्करण आजबाट सुरु भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त एक्पोलाई नेपाल पाकिस्तान मित्रता संघका अध्यक्ष हिमालयसम्मेर राणाले उद्घाटन गरेका हुन् । प्रर्दशनीमा पाकिस्तानी ब्यवसायीहरुले आफ्नो उत्पादनको प्रर्दशन तथा विक्री गर्ने बताइएको छ । प्रर्दशनमा छालाका सामाग्री, फर्निचर, ह्याण्डीक्राफ्ट, टेक्सटायल, प्राकृतिक गरगहन ... read more...
काठमाडौं । आइएमएस ग्रुपले आफ्नो व्यवसायलाई एकपछि अर्को गर्दै विस्तार गर्ने क्रममा ड्रोन व्यवसायमा पनि हात हालेको छ । आइएमएस ग्रुपले विश्व विजारमा ड्रोनको ७० प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको डिजेआई ड्रोनलाई नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । योसँगै नेपालमै आधिकारिक रुपमा पहिलोपटक ड्रोनको व्यवसाय शुरु भएको छ । डिजेआई क्यामेरा ड्रोन, एरियल फोटोग्राफीको स्टेबलाइजर र भिडियोग्राफीमा प्रख्यात मानिन्छ । विशेष श्रीजन ... read more...
'न व्यापार, न जागिर', कसले जोगायो सुन तस्कर भुसाललाई ?
२०७५ असोज १६ गते १२:४२
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सुन तस्करी माथिको अनुसन्धान अझै नरोकिएको बताइरहँदा दुबईबाट अवैध रूपमा सुन तस्करी गर्ने गिरोह सक्रिय छ । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको बिषयमा गठित उच्चस्तरीय सरकारी समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । अनुसन्धानको घेरामा उच्च तहका व्यक्तिहरू पनि आएको गृहमन्त्री थापाले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष ... read more...
मेलेम्ची आयोजनाको ३४० बोरा अर्घाँखाची सिमेन्ट बाटोबाटै गायब
२०७५ असोज ६ गते १०:४२
सिन्धुपाल्चोक । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँध निर्माणको लागि ल्याएको ३ सय ४० बोरा अर्घाँखाची सिमेन्ट विच बाटोबाटै गायब पारिएको छ । ३ सय ४० बोरा सिमेन्ट चोरीपछि विक्री गरेको काण्डलाई सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले समेत गुपचुप पारेको छ । असोज २ गते बाँध निर्माणका लागि ना ५ ख १०२७ नम्बरको दश चक्के ट्रकमा सो परिमाणको सिमेन्ट ल्याइएको थियो । काठमाडौंबाट अम्बाथानका लागि आएको उक्त सिमेन्ट राति ११ बजे अम्बाथान प ... read more...
काठमाडौं । बज्र एण्ड बज्राचार्य ईन्टरप्राईजेजले आफ्ना ग्राहकहरुलाई विभिन्न अफरको घोषणा गरेको छ । विगत २५ बर्षदेखि बाथरुम सामान, टायल्स र सेनिटरी सामानहरुको लोकप्रिय आधादर्जन ब्राण्डहरुकोआधिकारिक वितरक भई नेपालमा सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउँदै आएको नजिकिदै गरेको दशैंलाई लक्षित गरेर आफ्नो ग्राहक योजना सार्वजनिक गरेको हो । अफर अन्तर्गत २५ हजार ९९९ मा कम्बोट सेट, एक खरिदमा एक फ्रि, स्क्राचकार्ड, नगद फिर्त ... read more...
चितवन । चितवनस्थित केएल मल नारायणघाटमा सामसुङको सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । उक्त सेवा केन्द्र नारायणघाटस्थित केएल मलको दोस्रो तल्लामा रहेको छ । सो सेवा केन्द्रको आइएमएस सेल्स हेड राम श्रेष्ठ र सर्भिस म्यानेजर कुनाल गुरुङ्गले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै आइएमएस सेल्स हेड राम श्रेष्ठले भने,‘ग्राहकहरुलाई विभिन्न स्थानमा, राम्रो सेवा प्रदान गर्नु नै कम्पनीको उदेश्य ह ... read more...
धनुषा । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । जनकपुरमा आफ्नो शाखा सञ्चालनमा आएसँगै बैंकको शाखा कार्यालयको संख्या ६४ पुगेको छ । नयाँ शाखा कार्यालय राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाल श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटन कार्यक्रममा स्थानीय उद्योगी, व्यवसायी, शिक्षक, समाजसेवी तथा विभिन्न पेशाकर्मीहरुको उपस्थिति थियो । बैंकले निक्षे ... read more...
काठमाडौं । सुनचाँदी हस्तकलाको क्षेत्रमा काम गर्ने पैंतिस हजार भन्दा बढी कालीगढहरुको सिपलाई मान्यता दिने उदेश्य पाठ्यक्रम बनाउने तयारी भएको छ । जसलाई सुनचाँदी ब्यवसायीले सुनचाँदी हस्तकला क्षेत्रमा काम गर्दै आएका ब्यवसायी र कालीगढका लागि 'आईश ब्रेक' हुने बताएका छन् । सोही उदेश्य अनुरुप सुनचाँदी हस्तकला ब्यवसायी संघ र प्रावधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटिईभीटिई) को संयुक्त आयोजनामा पहिलोपट ... read more...
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २० औं अधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ४ जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । महासंघको १९ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी रवी सिंहले पुनः अध्यक्षको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । ‘जसको नेतृत्व, उसैको नीति’ भन्ने नारा लिएर अध्यक्षको उम्मेदारी घोषणा गरेका सिंहले ठूला व्यवसायी र साना निर्माण व्यवसायीकोबीचमा भएको खाडललाई पुर्नको लागि आफू पुनः नेतृत्व ... read more...